Search Results ဇာဂနာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 45
>ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ မိုးမခ (ရန်ကုန်)ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၇ သံဃာနာယကအဖြဲႚအပေၞကဲ့ရဲႚမမြဵားကို ဂရုပမြာ မဟုတ်ဆိုတဲ့ ဦးကုမာရ စစ်အစိုးရ သတင်းစာရငြ်းလင်းပြဲက ခဵယ်မနြ်းတဲ့ စက်တင်ဘာသံဃာနဲႚ လူထုဆိံ္ဋူပပြဲုကီး ထက်ြပေၞလာတော့မည့် စစ်အစိုးရရဲႚ ဘလော့ဂ်ဂၝမဵား သံဃာနာယကအဖြဲႚအပေၞကဲ့ရဲႚမမြဵားကို ဂရုပမြာ မဟုတ်ဆိုတဲ့ ဦးကုမာရ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ – ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေႚက ကဵင်းပခဲ့တဲ့ ဆဌမအုကိမ်ိုံင်ငံတော် သံဃာနာယကအဖြဲႚ အစည်းအဝေးမြာ ဥက္ကဌ မကြေူးမြိႚဆရာတော် ဦးကုမာရက လောကီဿ လူမကြိင်္စမဵားမြာ ပၝ၀င်ဆောင်ရက်ြမြ မူပြုကဖိုႚ အဖြဲႚအပေၞဝေဖန်ူပစ်တင်မမြဵားအပေၞ အလေးဂရုပလြောက်စရာ မဟုတ်လိုႚ ဓမ္ထပဒကို ကိုးကာူးပီး မိန်ႚဆိုသြားခဲ့ေုကာင်းေုကးမုံသတင်းစာက ဖော်ူပသြားခဲ့ပၝတယ်။ စက်တင်ဘာလအတငြ်း သံဃာတော်မဵားနဲႚူပည်သူမဵားရဲႚူငိမ်းခဵမ်းစြာ...
> မနြ်ုးကပ်နေသူတိုႛအတကြ်ူပက်လုံးမဵားမိုးကုပ်စက်ဝိုင်း ရန်သူမဵြိး ၃ပၝး “ရန်သူမဵြိးငၝးပၝး ဆိုတာက ရေ၊ မီး၊ မင်း၊ သူခိုး၊ မခဵစ်မိံစ်ြသက်သောသူ ငၝးပၝးနော်။ ခုေူပာင်းသြား္ဘပီ။ မင်းရယ် သူခိုးရယ် မခဵစ်မိံစ်ြသက်သူရယ်က တစ်ယောက်ထဲူဖစ်သြားလိုႛ ရန်သူမဵြိး သုံးပၝး …” ဒၝကတော့ စနေနေႛက ရန်ကုန်္ဘမြိႛ မ္တွော်စင်ကဋ္ဋန်း ဆေးရောင်စုံအ္ဘငိမ့်မြာူပက်ခဲ့တဲူ့ပက်လုံးတစ်ခုဖစ်ပၝတယ်။ မုကာခင်မြာူမန်မာူမန်မာူပည်အြိံႛ ရောက်ရိသြားတော့မယ်ပဵက်လုံးလိုႛ ယူဆရပၝတယ်။ မနြ်ုးကပ်နေတဲ့၊ စားဝတ်နေရေးဒုက္ခတငြ်းဆုံးကဵနေတဲ့၊ အာဏာပိုင်အစိုးရမင်းကို ရြံေုကာက်နေတဲူ့မန်မာူပည်သားတေအြဖိုႛ ဒီလိုပက်လုံးတေကြ မရိမြူဖစ်ပၝ။ စနေနေႛညက အ္ဘငိမ့်ူပက်လုံးတေဟြာူမန်မာူပည်မြာ ဋ္ဌကြံတြေႛနေရတဲ့ မတရားမတြေ၊္ဘပီးခဲ့တဲိံ့စ်ြလကူဖစ်ပဵက်ခဲ့တဲ့ ရဟန်းသံဃာထြိုိံပ်ကပ်ြခေဵမနြ်းခံရပုံတေကြို ထင်ဟပ်ထားပၝတယ်။ ရန်ကုန်္ဘမြိႛ မ္တွော်စင်ကဋ္ဋန်းအ္ဘငိမ့်စင်ရြေႛက ပရိသတ်...
> ကဗဵာဆရာ တင်မိုး သိုႚ မြေးနေႚ အမတ်ြတရ မောင်ရစ်ိုံဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၇ ဆရာနဲႚ မိံစ်ြက အောက်တိုဘာ ၁၄မြာ မိုးမခ ၃ိံစြ်ူပည့် အမတ်ြတရ စကားဝိုင်ူးပခြဲု့ကပၝတယ်။ ဆရာက နောက်ိံစ်ြကဵရင်၊ အယ်လ်အေက ပန်ူးခံနဲႚရေကန်နဲႚ ဥယဵာဉ်တစ်ခုမြာ မိုးမခ ၄ိံစြ်ူပည့် လုပ်မယ်လိုႚေူပာခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီနေရာကို တောင်သမန်အင်းလို နေရာလိုမဵြိူးမင်ယောင်ုကည့်ခဲ့မိုကပၝသေးတယ်။ ဒီိံစ်ြမြာ ဆရာ ၇၄ိံစြ်ူပည့်ပၝတယ်။ ဆရာသာရြိရင် သံဃာအရေးတော်ပုံအတကြ် ကလောင်ထမ်ူးပီး ကဗဵာတြေ၊ စာတြေ မမောမပန်းနဲႚူမန်မာူပည် လတြ်ေူမာက်ရေးလမ်းပေၞမြာ သာသနာ့အလံကို တဖက်တလမ်းက လငြ့်ထူခဵီတက်နေမြာူဖစ်ပၝတယ်။ ခုခဵိန်မြာ ဆရာရဲႚ တပည့်၊ သားေူမးတြေ၊...
> သီးလေးသီးရဲ့  တန်ဆောင်တိုင် အငြိမ့်ပွဲဇာဂနာနိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ ပန်းသီးဆို (တြိချိုးခွန်းတောက်)။ ။လ တန်ဆောင် ခါသမယ ပေမို့ ည အရောင်သာယာစွ ရယ်လို့ လာလာသမျှ စိတ်ပျော်ရွှင်။ ဖျော်ဖြေကြောင်းရယ် နဲ့ စုပေါင်းကာ အနုပညာအားကို ထားကြစုံလင်။ ။ နှင်းမှုန်ဝေ ခ၀ဲမာလာ ပန်းတွေက သင်းထုံနေအမြဲမကွာ လန်းပြန်တော့ ပုလဲရတနာ ဆန်းတို့က မှုန်ပြာဝေ စုံပဏ္ဏာခြွေပါလို့ ဝေးနေအပေါင်း (ပရိသတ်တို့ရေ) ဘုံ မြန်မာပြေ မှာတော့ အေးစေကြောင်း။ ။ ကြယ်သီး။ ။မင်္ဂလာ ရှိလိုက်တာ ကိုပန်းသီးရယ်။ တန်ဆောင်မုန်း ဗြိစ္ဆာ ကြတ္တိကာ ရောင်ဝါ ရှိန်သို့ ဖြိုး ခ၀ဲ ပွင့်ချိန် ခင်းကထိန် ရွှေအိမ်...
>ူပည်တငြ်းကလာတဲ့ အိုံပညိာိုံဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၇ ဇာဂနာူပတင်း ဘလောက်က ကောက်ိုံတ်သည်။ အင်တာနက် မိုးလေ၀သမြာ နံပၝတ် ၄ နဲႚ ၅ုကားမြာ ရြိပုံရသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> လန်ြခဲ့တဲ့ ၁လ က စစ်ဖိနပ်အောက်ကူမန်မာူပည်မဖော်ူပလိုက်ရတဲ့ သတင်းပေးပိုႚခဵက်မဵားမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ လန်ြခဲ့တဲ့ ၁ လ က စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၅ တငြ် သံဃာတော်မဵားက ဦးဆောင်ူပီူးမန်မာတူပည်လုံး အတိုင်းအတာူဖင့် အထေထြေသြပိတ် ခေၞယုခဲ့သည်။ ၂၆၊ ၂၇ တငြ် သံဃာတော်မဵား၊ ဘုရားစေတီဝင်းမဵား၊ ဘုန်းတော်ုကီးကေဵာင်းမဵာိးံငြ့် အနီးကပ် ထောက်ခုံကသူ ကေဵာင်းသား လူငယ်မဵား၊ မိသားစုမဵားကို စစ်အာဏာပိုင်မဵားက လက်နက်အင်အားသုံး အုကမ်းဖက်ူဖိခြဲခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီး ထောင်ခဵခဲ့သည်။ြိံပ်စက်ညငြ်းပန်းသတ်ူဖတ်ခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံ – ဇာဂနာ၊ ၄င်ူးပန်လတ်ြလာအူပီး ဆမြ်းကပ်စဉ်က ကိုရင်ကလေးမဵားရဲႚ ပုံ) လူပေၝင်း ရိာံငြ့်ခဵီူပီး သေဆုံးေုကာင်း၊...
> မိုးမခ ရဲႛ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီအောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ သီခဵင်းပဒေသာ သတင်းတိုထြာ သတင်းဆောင်းပၝး ကောက်ိုံတ်ခဵက်မဵား မောင်စမြ်းရည် – စစ်ထဲလိုက်ခဵင် လက်ညြိးထောင် ကဗဵာ ဇာဂနိာံငြ့် ဦးပန်တဵာ စကားလက်ဆုံ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ နားပဲ နားစေ …. https://t.co/ke5vmBc3dz https://t.co/vdnBJwHv30 about 18 hours ago ReplyRetweetFavorite